Ogaden News Agency (ONA) – Herman Cohen oo Sheegay In ree Galbeedku Ku Khaldameen In TPLF Talada Itoobiya Loo gacan Galiyay 1991.
Herman Cohen oo Sheegay In ree Galbeedku Ku Khaldameen In TPLF Talada Itoobiya Loo gacan Galiyay 1991.
Waxaa waraysi uu shalay bixiyay Herman Cohen, oo ahaa Kuxigeenkii Wasiirka Arimaha Dibbada ee Maraykanka isla markaana u qaabilsanaa Arimaha Africa ayaa sheegay ineey Maraykanku khalad wayn oo taariikhi ah galeen markay talada wadanka Itoobiya u gacan galiyeen Jabhada TPLF burburkii Mengistu kadib.
Mr. Cohen ayaa shalay waraysi uu Maraykanka ku qabtay kasheegay in go’aankaas oo lagu gaadhay shirkii London uu isagu khaladkii ugu waynaa ka galay u gacan galintii kooxta TPLF Itoobiya. Waxaana kamid ahaa hadalkiisa ” Waxaan islahayn waxay wadanka u horseedi doonaan dimuqraadiyad iyo maamul wanaag,cadaalad & sinaan ,laakiinse waxay horseedeen wax kadaran taliskii Mengistu“. Isagoo hadalskiisa siiwata ayuu yidhi Mr. Cohen ” Hadaan Moodayo ineey TPLF sidan ula dhaqmi doonaan shacabka Itoobiya marnaba fursadaas aan siinay maysan heleen”.
Kooxda TPLF ayaa gumaysi noocii ugu xumaa kula dhaqantay guud ahaan shucuubta ku hoos dulman Itoobiya gaar ahaan shacabka Somalida Ogadenya. Ciidanka Gumaysiga ayaa falal banii’aadamnimada ka dhan ah ka gaystay wadanka Ogadenya tan iyo maalintay talada dalka la wareegeen ilaa iyo maalinkaa maanta ah.